Igolide izindandatho - imigexo zabesifazane enomlando omude
Igolide izindandatho - imigexo zabesifazane, izimfashini okuyiwona ezinkulungwaneni zeminyaka. Emakhulwini eminyaka baye badlula, kodwa iminwe mncane engxenyeni fair lwesintu namanje ugabise obubizayo nangezinto enkulu amatshe ayigugu. Lokhu akulona ihaba: zesifazane amacici egolide avele ezinsukwini waseGibhithe lasendulo - kodwa okokuqala ababefaka oFaro nemindeni yazo njengoba iwuphawu lwamandla, ngaphezu, imihlobiso omkhulu esetshenziswa njengendlela uphawu lapho ubhala imiyalezo. Kamuva igolide izindandatho abangu ehlotshisiwe waseGibhithe isandla-off, kodwa abesifazane abahlala imikhiqizo engaphansi ocebile kufanele okuqukethwe isiliva nethusi, futhi ngezinye izikhathi ezenziwe ngengilazi nobumba.
UMbuso WaseRoma futhi kwaba uhlobo imfashini igolide izindandatho - inguqulo lensikazi sihloko sabonisa ukuthi umhlali okungokwakhe vele umuntu. Kwakungekhona ukuthi indandatho yomshado ngomqondo wesimanje bezwi, kunalokho, uhlobo maki "inkosi", ngubani ukuxwayisa wonke amadoda ukuthi ungumRoma akuyona khulula futhi ngaphansi kwesivikelo zezimali zenkosi yayo. Kulokhu, hhayi nje umhlobiso zigqokwe umunwe, uqhubeke isibambo nge nezizenze ukuze ayikwazi ukususwa. Kuyathakazelisa ukuthi isiko akunika emasongweni isithembiso ubonakele eRoma yasendulo. Nokho, umkhwenyana wanika umhlobiso akuyona intombazane nabazali bakhe - indandatho elula metal njengophawu ukuthi sithembisa ishade futhi ibe munye abayikhethile.
amadoda Eastern ezimnandi ngokungavamile njengoba izakhamuzi zaseRoma zisebenzisa izindandatho zegolide. imigexo lwabesifazane emazweni Eastern eseqala ukuveza nge imfihlo eziyinkimbinkimbi - ukususa umhlobiso ngomunwe kungenzeka ngendlela eyinkimbinkimbi kuphela, ngoba wenza iminyakazo ethile 5-10. Uma uke wazama yini ukususa umhlobiso ngenye indlela, nje waphela ibe izingxenye zayo abamelwe futhi abesifazane lishivsheesya lolu hlobo "ubumsulwa ibhande" babesolwa ngokuba imbuka.
ERussia yasendulo kwaba isizathu ukuhlobisa ngokwakho nabathandwayo imigexo abathandekayo - ukuvikela kusuka neso elibi, umonakalo, ukufa kanye nezinye ngamashwa rusichi egqoka bafaniswe izindandatho zegolide. okufushane Female lokhu talisman uvame ayenzelwanga ezandleni, kanye ukuhlobisa izigqoko ethempelini. Ngokusho amaphethini ku mikhiqizo ungakwazi ukunquma ukuthi iyiphi isizwe kungokwalabo owesifazane, kuze ngekhulu 7th. amasiko kwesikhathi exovwe, lamasongo zethempeli zazigaxwa nje ngenxa yobuhle.
Njengamanje, iringi - imihlobiso yegolide kwabesifazane, ngokuvamile amadoda ukunikeza sweethearts zabo ku isithembiso njengoba iwuphawu uthando nokwethembeka. Ngokwesiko, wedding izindandatho kumelwe abe amatshe ukusikeka, kodwa lo mthetho ubizwa ningagcini manje. Ngaphezu kwalokho, la amagugu esetshenziswa njengoba nesisekeli ngaphezu ukubukeka jikelele. Ngesikhathi esifanayo esithathwa namuhla ukuze uzizamele imihlobiso - ungakwazi ukugqoka eyodwa indandatho esimnandi omkhulu noma ngaphezulu ku munwe munye, noma qinisekisa ukuthi imikhiqizo emibili noma emithathu enkulu. Okubalulekile, uma ucezu zokuhloba kuyakhethwa ukunambitheka kanye lady uphilile, kuzokwenza sikhulise isitayela ubuhle indlovukazi yakhe.
Imigexo zikanokusho ... ekhaya: Kaffa ngezandla zakhe
Uyini antonym uyazi zonke wesikole